Kuyini Indawo Yesikhumba? - I-Semalt Answer
Isayithi elishayo yiwebhusayithi ekopisha okuqukethwe kwamanye amabhulogi amawebhusayithi asebenzisa amasu wokuhlunga iwebhu. Lokhu okuqukethwe kufakwe ngenhloso yokwenza imali, noma ngokukhangisa noma ngokuthengisa idatha yomsebenzisi. Izingosi ezihlukahlukene ezihlukumezayo ziyahlukahluka ngamafomu nezinhlobo, kusukela ku- amawebhusayithi okuqukethwe ogaxekile ku-aggregation yamanani kanye nezitolo zokuthenga kwi-intanethi.
Izinjini ezahlukene zokucwaninga ikakhulukazi i-Google zingacatshangwa njengezingosi ze-scraper. Baqoqa okuqukethwe kusuka kumawebhusayithi amaningi, basindise ku-database, bhala futhi babonise okuqukethwe okukhishwe noma okukhishwe kubasebenzisi kwi-intanethi. Eqinisweni, okuningi okuqukethwe okwenziwe noma okukhishwe yizinjini zokusesha kubhalwe nge-copyright.
Amanye amasayithi aqhathaniswayo adalwe ukwenza imali ku-intanethi ngokusebenzisa izinhlelo zokukhangisa ezahlukene. Ezimweni ezinjalo, kuthiwa yi-Made for AdSense amawebhusayithi noma i-MFA. Igama elihlehlisayo libhekisela kumasayithi angenawo inani lokuhlenga alindele ukuheha, ukuheha futhi ukubandakanya izivakashi kumawebhusayithi achaziwe ukuze uthole ukuchofoza kuzikhangiso. Amawebhusayithi we-Made for AdSense nama-blogs abhekwa njenge-spam enamandla yokusesha ogaxekile. Bahlaziya imiphumela yokusesha ngemiphumela engaphansi-eyanelisayo. Ezinye izingosi ezilahlayo ziyaziwa ngokuxhumanisa namanye amawebhusayithi futhi zihlose ukuthuthukisa izinga lokusesha injini ngamanethiwekhi angasese ebhulogi..Ngaphambi kokuthi i-Google ibuyekeze izilungiswa zayo zokusesha, izinhlobo ezahlukene zezingosi ezisetshenzisiwe ezisetshenziselwa ukuba zidume phakathi kochwepheshe be-SEO ochwepheshe abamnyama nabathengisi. Basebenzisa lolu lwazi nge-spamdexing futhi benza imisebenzi ehlukahlukene.
Amasayithi aqhathaniswayo ayaziwa ngokwephula imithetho ye-copyright. Ngisho nokuthatha okuqukethwe kusuka kumasayithi avulekileko ukuphulwa kwe-copyright, uma kwenziwa ngendlela engahloniphi noma yiliphi ilayisensi. Isibonelo, ilayisensi yezincwadi zamahhala ze-GNU namalayisensi we-Creative Commons ShareAlike asetshenziselwa i-Wikipedia futhi idinga ukuthi umshicileli ophinde aphinde abuyele kwe-Wikipedia kwadingeka azise abafundi ukuthi okuqukethwe kukopishwe ku-encyclopedia.
Amasu noma izindlela lapho amawebhusayithi ahlaselayo ahloswe khona ahluka komunye umthombo kuya komunye. Isibonelo, amawebusayithi anesibalo esikhulu sedatha noma okuqukethwe njengama-electronics abathengi, izindiza ezindizayo kanye nezitolo zeminyango, angabhekwa njalo ngabathengi. Abancintisana nabo bafuna ukuhlala benolwazi mayelana namanani wamanje namagugu emakethe alo mkhiqizo. Olunye uhlobo lwe-scraper ludonsa imibono kanye nombhalo kusuka kumasayithi afaka phezulu kwamagama angukhiye athile. Bavame ukuthuthukisa isikhundla sabo ekhasini le-search engine (SERP) kanye ne-piggyback kumazinga okuqala wekhasi lewebhu. Ukudla kwe-RSS nakho kuyingozi kuma-scrapers. I-scrapers ivame ukuhlotshaniswa nemifula yokuxhumanisa futhi iyaqaphela lapho isayithi le-scraper lixhumanisa kwiwebhusayithi efanayo ngokuphindaphindiwe.
Abahleli abadale ama-scraper sites bangathenga izizinda eziphelelwe yisikhathi ukuze ziphinde zisetshenziselwe izinhloso ze-SEO. Umkhuba onjalo uvumela ochwepheshe be-SEO basebenzise wonke ama-backlink aleli gama lesizinda. Abanye be-spammers bazama ukufanisa izihloko zezingcingo eziphelelwe yisikhathi kanye / noma ukukopisha wonke okuqukethwe kusuka ku-Archive ye-intanethi, ukugcina ubuqiniso nokubonakala kwaleyo sayithi. Izinsizakalo zokubamba ngokuvamile zihlinzeka ngesikhungo ukuthola amagama wesizinda esiphelelwe yisikhathi, futhi abaduni noma abagaxekile basebenzise lolu lwazi ukuthuthukisa amawebhusayithi abo.